pantoum – Stories of Sandeept
माइती जान नपाउने चेली
On August 24, 2017 August 25, 2017 By sandeept252In नेपाली, Family, Humanity, Humans and Humanity, Nepali, Nepali Poem6 Comments
सुविधाले सम्पन्न भएका ठाउँमा
चेलीहरू माइती गइरहँदा हुन् ।
हासो र खुसी नराखी दाउमा
आमाबाबालाई खुसी राखिरहँदा हुन् ।।
चेलीहरू माइतीघर आउलान् भन्ने
आशैआशमा बित्छ यो जुनी !
आमाबाबालाई खुसी राख्लान् भन्ने
सपनामै अल्झन्छ यो जुनी !!
आशैआशमा बित्छ यो जुनी
जन्मघरमा फेरि पाइला राखुँला भनी !
सपनामै अल्झन्छ यो जुनी
आमाबाबासँग फेरि भेट होला भनी !!
जन्मघरमा फेरि पाइला राखुँला भनी
सोच्छु बिहा भई आएको यो ठाउँमा ।
आमाबाबासँग फेरि भेट होला भनी
नौ डाँडापारिको त्यो जन्मगाउँमा ।।
[मलाया शैली पान्टुममा नेपाली कविता लेख्ने यो प्रयाश । यस शैलीमा पहिलो स्टेन्जा (stanza) का दोस्रो र चौथो हरफ दोस्रो स्टेन्जामा पहिलो र तेस्रो हरफ बन्छ्न् अर्थात् दोहोरिन्छ्न् ।